Sierra Negra Volcano, Sierra Negra, Santo Tomas - Nosy Galapagos
Amerika Atsimo Ekoatera Nosy Galapagos
Haavo ambonin'ny ambony ranomasina: 1,124 m;
Ny diametr'ilay crater: 11 km;
Ny fipoahana farany: 2005
Ny Galapagos dia nosy volkano. Ny ankamaroan'ny tanin'izy ireo dia faritany lava amin'ny loko samihafa. Ny Nosy Isabela , tahaka ny nosy hafa ao amin'ny vondronosy, dia nivoaka tamin'ny rano 5 tapitrisa taona lasa izay. Ny fijerin'ny vorona iray dia mampiseho volkano maromaro. Ny lehibe indrindra amin'izy ireo, izay avo lenta mihoatra ny 1,124 kilometatra - dia ny tiroida (natsangana vokatry ny ravina lava miverimberina sy manana endrika manify) ny volokano Sierra Negra. Io no faharoa lehibe indrindra amin'ny Nosy Galapagos .
Inona no mahaliana momba ny toerana mahaliana?
Nandritra ny 200 taona lasa, nihoatra ny 50 ny Nosy Galapagos, ary misy volkano mafana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny Sierra Negra (amin'ny dikanteny avy amin'ny Black Mountain Espaniôla) dia tsy misy antony manokana.
Ny mpitsidika rehetra dia tonga amin'ny volkano miaraka amin'ny halehibeny goavam-be sy tsara tarehy manodidina azy. Ny Sierra Negra dia volkano mavitrika, ny fipoahana farany tamin'ny 2005.
Ny volkano dia manana lanjany lehibe - ny vavany dia sambo lehibe iray ary 9,3 km metatra. Ny mpitsidika dia omena fahafahana handeha amin'ny sisin'ny volkano amin'ny soavaly, jereo ny vorona, ny biby ary ny zavamaniry. Ny mandeha an-dàlana sy ny fizahantany tsy miankina eto dia voarara tanteraka.
Ny lalana mankany amin'ny crater dia tsy avela afa-tsy amin'ny torolàlana iray. Voarara ny midina any amin'ny caldera, satria mitete tsy tapaka ny entona entona. Ankoatra izany, ny fitsaboana ny solifara mandritra ny fotoana lava dia mety hitarika ho amin'ny fahafatesana.
Misy safidy roa ny mitsidika ny volokano: ny voalohany - hiantehitra amin'ny departemanta fandaharana ary avy eto mba hankasitraka ny fomba fijery manodidina; ny faharoa - miaraka amin'ny vondrona sy ny mpampianatra hiakatra ho any amin'ny crater. Ny fahafinaretana toy izany dia $ 35, ny soavaly lafo vidy kokoa - $ 55.
Fialan-tsasatra any Sierra Negra
Raha manapa-kevitra ny handoro volkano ianao dia mila manomana mialoha. Raha tsy manana endrika ara-batana tsara dia tsy misy zavatra atao eto. Ary tsy dia be loatra amin'ny fanabeazana, tsotra fotsiny, ohatrinona ao anatin'ny fepetra manodidina. Ora efatra sy antsasaky ny ora dia tsy maintsy mandeha haingana amin'ny toerana mihetsiketsika miaraka amin'ny fiakarana sy fidinan'ny hafanana be loatra - toy ny tsy maintsy halefa ny soavaly, tsy afaka hahatakatra ny hafanan'ny taniny ny kitron-dry zareo! Ho an'ny mpizahatany, ny mpitaingin-tsoavaly miaraka amina hodi-doko dia tsy maintsy ilaina - hiaro ny tongotr'izy ireo amin'ny fandoroana sy ny ratra.
Ny lalana mankany Sierra Negro dia mety ho tanora sy antitra. Tsy hita eto ny mpizahatany zokiolona. Misy fanahy mahery, saingy matetika izy ireo dia tsy mamily ny ampahatelon'ny lalana. Vokatr'izany, ny fahasosorana sy ny fandaniana ara-bola tsy ilaina.
Ny faharetan'ny fitsangatsanganana dia ora dimy sy sasany. Nandritra izany fotoana izany, dia naharesy ny lavany 18 km. Ny fiakarana dia manomboka amin'ny ala tropikaly matevina. Indraindray dia mila mandresy toerana mafana ianao, ary na ny rahona aza miaro ny masoandro dia tsy mamonjy. Raha tsy izany dia mila maka masoandro ianao ary misotro rano araka izay tratra (araka izay azonao atao).
Ny ankamaroan'ny lalana dia efitra iray lava maina mafana. Ny farany, ilay tranonkala miavaka indrindra, amin'ny 4 km no maharesy an-tongotra, ny soavaly sisa tavela amin'ny toeram-piantsonana.
Ny tontolo ambanivohitra dia tsy hay hadinoina. Tsara tarehy indrindra rehefa mameno ny volon'ny volokano amin'ny volony fotsy ny zavona, toy ny "fipoakan'ny fotsy." Any amin'ny toerana izay tsy mbola nikitika ny zavamaniry ny lava, betsaka ny ahitra, mihaingo ny voninkazo maro samihafa. Eo amin'ny kihon-drakotra amin'ny isa marobe dia maniry hazo guava. Ny voany dia avela hisakanana ny zavatra rehetra.
Ny manakaiky kokoa ny toerana misy ny lava, dia lasa kely ny maitso. Misy lamaody lava be dia be misy - ny fotsy mainty dia miova amin'ny vatosoa mavokely, mavo ary volomparasy. Amin'ny firaisana tsy hay lazaina, dia miara-mivory ireo vato matanjaka sy mamiratra. Ao amin'ny mpizahatany izay tonga sambany vao tonga dia nitodika tany amin'ny tandindom-paharivan'ny sarivongana marobe. Eo am-paravodilanitra, ny ranomasimbe manga dia manjelanjelatra, ary manaraka azy dia lalana iray fotsiny eo amin'ny lalan'ny fiakarana ny lava.
Ahoana no ahatongavana eto?
Afaka mankany amin'ny Sierra Negro ianao ao anatin'ny fitsangatsanganana. Ny fandrindrana ny tenany dia voarara, satria 95% ny nosy Galapagos , anisan'izany i Isabela - ny National Reserve . Fitsangatsanganana manomboka amin'ny tanànan'i Villamil . Tsy miankina amin'ny alàlan'ny taxi afa-tsy amin'ny toerana fanombohana ny vondrona fitetezam-paritra. Aza adino ny mifampiraharaha amin'ny mpamily fiarakaretsaka mba hiandry mandra-pahitanao ny hatsarana sy ny sary.
Isan'ny Plaza Sur
Nosy ny sata Sinoa
Dimy amin'ny embryon mandritra ny herinandro - latabatra
19 fitaratry ny fanahy
Larian'ny kavina - kilasy maoderina
Miatrika ny fototry ny trano - inona no fitaovana tsara kokoa?
Karazan'akanjo maingoka amin'ny vehivavy
Vorona miteraka ho an'ny trano anatiny
Fiteny Rosiana - trano avy amin'ny bar iray
Ny kômpia filamàna dia mihosin-davenona amin'ny multifariate
Fanavaozana ny eritreritra sy ny faniriana
Tui Oil - fampiharana
Wall Walloon - Autumn
Andro Vegan Androany
Amin'inona no hitafy moka beige?
Azo atao ve ny mamo marary?